လူငယ်တွေအတွက် ဂိမ်းကစားလို့လဲအဆင်ပြေပြီး သုံးလို့လဲကောင်းတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေဝယ်ယူတော့မယ်ဆို အဓိကသိထားရမည့်အချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ? - Shop
လူငယ်တွေအတွက် ဂိမ်းကစားလို့လဲအဆင်ပြေပြီး သုံးလို့လဲကောင်းတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေဝယ်ယူတော့မယ်ဆို အဓိကသိထားရမည့်အချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ?0430
The KaungHtet August 12, 2020 9:28 am August 12, 2020
ခုခေတ်လူငယ်တွေဟာ ခေတ်နှင့် အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြပြီး အသစ်သစ်သောနည်းပညာတွေကို စမ်းသပ်ချင်လာကြပါတယ်။ ခုဆိုရင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းတွေလဲထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ပြင်ပလောကကြီးနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်စေဖို့ ဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးလောက်တော့ဝယ်ထားဖို့လိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီထဲကမှာမှ ဂိမ်းကစားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား Noteတွေ၊ Photoshop တွေ၊ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တာတွေ စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ယူဖို့အတွက် အနည်းဆုံး လိုအပ်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ System Requirement တွေကိုသိထားမှရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲအဲ့တာဆိုရင်တော့ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် system requirementတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ Game တွေကို အတော်အသင့်ဆော့ကစားနိုင်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ 4GB RAM ပါတဲ့ဖုန်းဆိုအဆင်ပြေပါပြီ။ ဂိမ်းသီးသန့်ဆော့ချင်တဲ့ ဖုန်းဆိုရင်တော့ RAM, GPU, CPU သေချာရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့ဖို့သင့်တော်တဲ့ ဖုန်းတွေအကြောင်းသိချင်ရင်တော့ Shop Blog မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းအတွက် ဆိုရင် 24 MP လောက်ပါတဲ့ ကင်မရာဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ ဒီထက်ပိုကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 40 MP ပါတဲ့ဖုန်းတွေကသင့်တော်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် စျေးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေက ကင်မရာပိုင်းပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီး System Description ကိုမကြည့်ပဲဝယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းလဲ အသင့်အတင့်ရှိပြီး ကင်မရာလဲရိုက်ရအဆင်ပြေတဲ့ ဖုန်းပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီ။ Pixel ကင်မရာ ပါတဲ့ဖုန်းမျိုးကြိုက်တတ်တဲ့သူလဲဖြစ် ဖုန်းကိုလဲစျေးအများကြီးမသုံးချင်ဖူးဆိုရင်တော့ 30MP ကင်မရာပါတဲ့ ပုံမှန်ဖုန်းမျိုးကို ဝယ်ယူပြီး Pixel App နဲ့ရိုက်ရင်လဲအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
Photoshop တွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ CPU အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဖုန်းလောက်ဆိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းဖုန်းအများစုဟာ Photoshop ပိုင်းတွေကို အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ဆောင်လို့ရနေပြီဖြစ်ပြီး Model အောက်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေက လွဲလို့ ကြိုက်ရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Shop.com.mm မှာဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ ရောင်းချသူပေါင်းများစွာရှိတဲ့အတွက် လူငယ်တွေအကြိုက် ဒီဇိုင်းလေးတွေလဲမိုက်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းတွေကို တစ်နေရာထဲမှာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ…
ဖုန်းများဝယ်ယူရန် – Link
✔️ ပစ္စည်းအိမ်ရောက်မှ ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ စနစ် (Cash On Delivery) လည်းရှိပါတယ်။
🏠 အော်ဒါတင်တဲ့အချိန်လိပ်စာမပြည့်စုံရင် အော်ဒါ cancel ဖြစ်မှာမို့ အိမ်နံပါတ်၊လမ်းနာမည်၊ မြို့နယ်၊တိုင်း လိပ်စာအပြည့်အစုံဖြည့်သွင်းပေးပါနော်..
Previous Articleအိမ်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ… Shop.com.mm မှာရှာကြည့်လိုက်ရအောင်Next ArticleBarbecue လုပ်စားတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်ရအောင် ?